Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo kulan gaar ah ka leh xaaladihii u dambeeyay ee arrimaha dalka Soomaaliya. | WHEELIYE.COM
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo kulan gaar ah ka leh xaaladihii u dambeeyay ee arrimaha dalka Soomaaliya.
Posted on March 18, 2010 by itb
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa waxay maanta leeyihiin kalfadhi oo aan Caadi ahayn, kaasoo ay ku dhageysanayaan warbixin uu xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-Moon saddexdii bilood-ba mar ka diyaariyo arrinta Somalia.
Warbaahinta ka howl gasha xarunta Qaramada Midoobay ayy shalay la siiyey Qeybo ka mid ah warbixintaas, ha ahaatee xoghayaha guud ayaa la sheegay inuu si aad ah uga deyrinayo xaaladda ay Soomaaliya ay ku sugan tahay, gaar ahaan dowladda Soomaaliya oo ay Qaramada Midoobay ka dambeysay dhisitaankeeda, si weynna u taageersan tahay.
Sidoo kale Xoghayaga guud ee QM Ban Ki-Moon ayaa markii ugu horreysay ugu baaqaya dalalka xubnaha ka ah Golaha Ammaanka, in ciidan caalami ah loo diro Somalia, si loo badbaadiyo DKMG ah, iyo jiritaanka hey’adaha qaranka ee sharciga ah.
Waxaa lagu wadaa in Markii uu goluhu warbixintaas dhageysto kaddib, waxaa si gaar ah u kulmaya guddi uu Goluhu horey u sameeyey, kaasoo ka baaraan-daga in cunaqabateyn la saaro dalalka iyo shakhsiyaadka loo aqoonsaday inay ku hor gudban yihiin dowladnimada Somalia, isla markaana ay hurinayaan colaadda.
Sida la wada ogsoon yahay Horey ayuu Golaha Ammaanku u canaantay dowladda Eritrea, oo caasimadda dalkeeda ee Asmara ku marti-galisa Isbaheysiga Dibu-Xoreynta, lana rumeysan yahay inay hiil iyo hoo siiso ururrada Xisbul-Islaam iyo Al-Shabaab, inkastoo ay Asmara eedeyntaas gaashaanka u daruurtay.
Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa isagoo VOA-da u warramaya horraantii bishan, wuxuu sheegay in kalfadhigani uu noqon doono mid lagu xanuujiyo dalalka iyo shakhsiyaadka nabad-diidka ah. Intaas wuxuu ku daray in xayiraado lagu soo rogi doono garoomada iyo dekedaha ay ka taliyaan kooxaha dowladda kasoo horjeeda.
Ilo kala duwan oo sugan xarunta Qaramada Midoobay ee New York ayaa ii sheegay inaysan u badneyn inuu goluhu isla maanta-ba cunaqabateyn saaro Eritrea iyo shakhsiyaadka la qoonsaday, balse in Goluhu uu qaadi doono tallaabadii ugu horreysay ee uu go’aankaas ku qaadan lahaa.
Diblomaasi aan la xiriiray oo ku sugan xarunta Qaramada Midoobay ayaa ii sheegay in Eritrea ay waddo dadaal ay dooneyso inay ku baajiso in cunaqabateyn la saaro, iyadoo ballan qaadday inaysan hub iyo saanad u diri doonin kooxaha dowladda kasoo horjeeda, isla markaana inay gacan ka geysan doonto sii deynta laba nin oo Faransiis ah oo markii hore gacanta u galay ururka Xisbul-Islaam, oo uu guddoomiye ka yahay wadaad xiriir soke la leh Asmara.
Si kastaba ha ahaatee, kalfadhiga Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qeyb ka ah dadaal caalami ah oo la doonayo in lagu badbaadiyo DKMG ah ee itaalka daran. Midowga Yurub sarkaalka masuulka uga ah arrimaha dibadda, Javier Solana, ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in khubaro xagga amniga ah oo reer Yurub ah ay horraanta bisha soo socota tagi doonaan Muqdisho, si ay u dhabbaha ugu sii xaaraan tababar uu Midowga Yurub u fidinayo ciidanka DKMG ah.
xigasho SomaliSwiss New York
Filed under: Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo kulan gaar ah ka leh xaaladihii u dambeeyay ee arrimaha dalka Soomaaliya. |
« Golaha Q.midoobay oo kulan eey albaada u xiranyihin ka yeshay warbixin eey soo saren dhawan gudiga dabagalka Qaramada Mioodbay ee arimaha Soomaaliy ninka aduunka ugu xooga badan bariga dhexe oo ah nin u dhashay dalka masar »